သဘာဝထွက်ကုန်များဖြင့် ဖန်တီးပြုလုပ်ထားသော LAMINATE FLOOR - BaganMart
Bedroom Interiors Decoration Services
သဘာဝထွက်ကုန်များဖြင့် ဖန်တီးပြုလုပ်ထားသော LAMINATE FLOOR
စြေးနူနျး : 2000 - 3000 Kyats per Set(s)
Brand : GRANDSTYLE
Model : EL-1098
လုပျငနျးအမညျ : GRAND STYLE Co.,Ltd Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 095-088-488, 011-224217
Certification : 300
Product Country : None
Product Size : Width cm - Length cm - Height cm
အခန်းအနေအထားနှင့် လိုက်လျောညီထွေမည့် သင့်တော်သော Material များကို ရွေးချယ်အကြံပေးခြင်း ဖြင့် အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုများ Customer များ စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။ထို့အပြင် အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်သော အင်ဂျင်နီယာ များ၏ အရည်အချင်းနှင့် ကျွမ်းကျင် လုပ်သားများဖြင့် အိမ်တိုင်ရာရောက် စိတ်တိုင်းကျ အကောင်းဆုံး တပ်ဆင်ပေးလျက်ရှိသည်။ဈေးနှုန်း သင့်တင့်မှု ရှိပြီး ဆန်းသစ်လှပသော ဒီဇိုင်းစုံ အရောင်အသွေး စုံစုံလင်လင်ဖြင့် စတိုင်ကျ လှပသော ကြမ်းခင်းများကို ဖြန့်ဖြန့်ရောင်းချလျက် ရှိသည်။ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပြီး ကြာရှည်ခံ အသုံးပြုနိုင်သော ကြမ်းခင်းဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။သဘာဝ သစ်သားကို အခြေခံ၍ ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ကြာရှည်အသုံးခံပြီး အညစ်အကြေးများကို အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။လူကြီးမင်းတို့ ရွေးချယ်သည့် ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်၍ ဈေးနှုန်းအမျိူးမျိူး ရရှိနိုင်ပါသည်။
Grand Style "Your Project Partner" is the leading construction material store in Myanmar since 2014. We are providing product range cover more than 1,200 items for both small scale of construction until mega project with complete services as one stop shopping.
ခိုင်ခံလှပသော Laminate Floor များ
အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော POLISHED PORCELAIN TILE
လှပဆန်းသစ်သော ဒီဇိုင်းများဖြင့် POLISHED PORCELAIN TILE
For သဘာဝထွက်ကုန်များဖြင့် ဖန်တီးပြုလုပ်ထားသော LAMINATE FLOOR
May I get the quotation for "သဘာဝထွက်ကုန်များဖြင့် ဖန်တီးပြုလုပ်ထားသော LAMINATE FLOOR" ?